Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.5 siyaabaha New of weyddiinaya
Sahamooyinka dhaqameed waa la xidhay, caajis, iyo laga saaray nolosha. Hadda waxaan waydiisan karnaa su'aalo in ka badan oo furan, xiiso badan, iyo in ka badan oo ku jira nolosha.
Qaabka guud ee qalabka sahanka ayaa dhiirrigeliyay cilmi-baarayaasha inay ka fekeraan cilmi-baarista sahaminta sida geedi socod laba-qaybood ah: qorista jawaab-celiyayaasha iyo waydiinayaan su'aalo. Qaybta 3.4, waxaan ka dooday sida da 'da da' da casriga ah isbeddelayo sida aan u shaqeyneyno jawaabeyaasha, imika waxaan ka wada hadli doonaa sida ay u sahlayso cilmi-baarayaasha in ay su'aalo waydiiyaan siyaabo cusub. Nidaamyadan cusub ayaa loo isticmaali karaa shaybaarka suurtogalka ama shay aan macquul ahayn.
Mode Baadhitaan waa deegaanka ay ku su'aalaha lagu weydiiyo, oo waxay ku yeelan karaan saamayn muhiim ah oo ku saabsan cabbirka (Couper 2011) . Xilligii ugu horeeyay ee sahan cilmi baaris ah, qaabka ugu caansan ayaa wajiga wajiga wajiga, halka xilliga labaad, waxay ahayd telefoon. Qaar ka mid ah cilmi-baadhayaashu waxay eegaan marxaladda seddexaad ee cilmi-baarista sahaminta iyadoo ah kaliya ballaarinta hababka sahan ee ay ku jiraan kombiyuutarada iyo telefoonnada gacanta Si kastaba ha noqotee, da'da dijitalka waa wax ka badan uun isbeddelka tuubooyinka iyada oo loo marayo su'aalaha iyo jawaabaha socodka. Taa bedelkeeda, isbedelka ka yimaada analogga illaa dijitalka - iyo waxay u badan tahay inuu u baahan yahay - cilmi-baarayaasha si ay u bedelaan sida aan u waydiino su'aalo.
Daraasad ay sameeyeen Michael Schober iyo asxaabtiisaba (2015) muujinaya faa'iidooyinka lagu hagaajinayo hababka dhaqanka ee hababka is-gaarsiinta digital-age. Daraasaddan, Schober iyo asxaabtuba waxay isbarbar dhigeen qaabab kala duwan oo ay dadka weydiinayaan su'aalaha iyaga oo isticmaalaya telefoonka gacanta. Waxay isbarbardhigeen xog ururinta iyadoo la adeegsanayo sheekada codka, taas oo noqon laheyd tarjumaad dabiiciga ah ee hababka labaad, si loo uruuriyo xogta iyadoo la adeegsanayo microsurvveys badan oo loo soo diro fariimaha qoraalka ah, oo ah qaab aan lahayn muuqaal hor leh. Waxay ogaadeen in microsurveys loo diro fariimaha qoraalka ah waxay keeneen xog tayo sare leh marka loo eego wareysiyada codka. Si kale haddii loo dhigo, si fudud u wareejinta habka hore ee dhexdhexaadinta cusub ma keenin xogta tayada ugu sareysa. Taa baddalkeeda, iyadoo si cad u fekereysa awoodaha iyo qaababka bulshada ee wareega taleefannada gacanta, Schober iyo asxaabtu waxay awoodeen inay horumariyaan hab fiican oo loo waydiiyo su'aalo keenaya jawaabo tayo sare leh.
Waxaa jira cabbirro badan oo ay ka mid yihiin cilmi baarayaashu ay uqalmi karaan hababka sahan, laakiin waxaan u maleynayaa in qaabka ugu muhiimsan ee hababka sahan ee dijitaalka ah ay tahay in ay yihiin kumbuyuutar-maamul , halkii laga waraystuhu-maamuli lahaa (sida baaritaannada taleefannada iyo wajiyada fool-fool) . Qaadashada waraysiga dadka ka baxsan geedi socodka uruurinta xogta waxay bixisaa faa'iidooyin aad u fara badan waxayna soo bandhigeysaa qaar ka mid ah cilladaha. Marka laga eego faa'iidooyinka, ka-saaridda wariyeyaasha bani'aadamnimada waxay yareeyn kartaa khiyaamaynta rabitaanka bulshada , u jeedka jawaab-celiyeyaasha in ay isku dayaan inay soo bandhigaan sida ugu wanaagsan ee suurtagalka ah, tusaale ahaan, habdhaqanka aan qarsoodi lahayn ee qallafsan (tusaale, isticmaalka daroogada sharci darrada ah) dabeecad (sida, codeynta) (Kreuter, Presser, and Tourangeau 2008) . Ka-qaadista wariyeyaasha bani-aadamka waxay sidoo kale ka tirtiri karaan saamilaha wareysiga , rabitaanka jawaabaha lagu saameeyo siyaabo gaaban oo ay ku muujinayaan sifooyinka waraysiga bini'aadamka (West and Blom 2016) . Marka laga soo tago suurtagalnimada in si sax ah loo hagaajiyo saxnaanta noocyada su'aalaha qaarkood, sifeynta wariyeyaasha bini'aadamnimada ayaa sidoo kale hoos u dhigaysa kharashyada-waqtiga wareysiga waa mid ka mid ah kharashyada ugu weyn ee cilmi baarista sahanka-oo kordhiya dabacsanaanta sababtoo ah jawaabeyaasha way ka qaybgeli karaan mar kasta oo ay rabaan, . Si kastaba ha ahaatee, ka qaadida wareysiga bini'aadamku wuxuu kaloo abuuraa caqabado. Gaar ahaan, wareysiyeyaashu waxay kobcin karaan xiriirka ka jawaabaya jawaabayaasha oo kordhin kara heerka kaqeybgalka, waxay caddeeyaan su'aalaha jahawareerka, iyo in ay sii wadaan ka-qaybgalayaasha ka-qaybgalayaashooda inta ay ku (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) su'aalo-waydiin ah (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) . Sidaa daraadeed, bedelida xog -wareysiiye- habka sahanka ee loo wareejiyay qof kumbuyuutar ah ayaa abuuraya fursado iyo caqabado labadaba.
Marka xigta, waxaan soo bandhigi doonaa laba waji oo muujinaya sida cilmi-baarayaashu uga faa'iidaysan karaan qalabka da'da dijitalka ah si ay u waydiiyaan su'aalaha si ka duwan: qiyaasidda dawladaha gudaha waqti wakhti ku habboon iyo meel ayadoo loo marayo qiimaynta xasaasiga ah ee cimilada (qaybta 3.5.1) iyo isku-dhafka xoogga oo ah su'aalo sahlan oo la xidhay oo la xidhay iyadoo loo marayo baaritaano wiki (qaybta 3.5.2). Si kastaba ha noqotee, u wareegitaanka kumbiyuutarka, oo la isweydiiyo, ayaa macnaheedu yahay in aan u baahannahay inaan qaabeyno siyaabaha loo waydiin karo inay ka raaxaystaan ​​ka qaybgalayaashu, habraac mararka qaarkood loo yaqaan " gami" (qaybta 3.5.3).